तानातानमा महन्थः प्रधानमन्त्रीसम्मको अफर ! « Drishti News – Nepalese News Portal
तानातानमा महन्थः प्रधानमन्त्रीसम्मको अफर !
काठमाडौं । जनता समाजवादी पाटी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर सत्ता समीकरणको राजनीतिमा तानातानमा परेका छन् । सत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नयाँ सरकारको नेतृत्व दाबी गरेको नेपाली काँग्रेसले जसपालाई आ–आफ्नो कित्तामा उभ्याउन वार्ता गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि ठाकुरसँग संवाद जारी राखेको छ ।
ठाकुरसँग अहिले ओली, काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले सत्ता समीकरणमा साझेदारीको प्रस्ताव गरेका छन् । तर ठाकुर भने ओलीसँग निकट देखिएका छन् ।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
बागलुङमा चट्याङबाट दुईजनाको मृत्यु
बागलुङ । बागलुङमा चट्याङबाट दुईजनाको मृत्यु भएको छ । हावाहुरीसँगै परेको चट्याङका कारण एक जना